HUAWEI Watch 3, oo leh HarmonyOS waa tixraaca smartwatch | Wararka Gadget
Miguel Hernández | | Qalabka la gashan karo, qalabka, Smartwatch
Maanaan keenin saacad caqli gal ah degelkeena in mudo ah hada, marka maanta waa maalin wanaagsan oo aan kugulasocono adiga oo lafa-guraya falanqeyntii ugu dambeysay uguna casrisanayd ee smartwatch ee suuqa, Huawei Watch 3, oo keenta wax kabadan qalabka iyo naqshadeynta Sare-dhamaadka, waxaa weheliya Harmony OS 2.0, oo ah nidaamka hawlgalka ee ay shirkadda Huawei ku doonayso in ay ugu dambayn iskaga hadho Google.
Xaqiiqdii waan hubaa inaanan ahayn, markaa nagala qaybgal dib-u-eegidgan.
Ugu horreyntii iyo sida had iyo jeerba, waxaan ku xusuusinaynaa inaan haysanno falanqeyn fiidiyoow ah oo laga heli karo kanaalkeenna YouTube, markaa ha moogaanin fursad aad ku qorto oo aad u fiirsato dib-u-eegidgan ku dhowaad nus-saac kaas oo aadan ka maqnaan doonin faahfaahin.
Hadaad ka heshay, ku iibso qiimaha ugu fiican> BUY
1 Naqshad: Lacag badan, Huawei badan
2 Qalabka iyo softiweerka, HarmonyOS waa miraha doolshada
3 Shaashadda iyo isku xirnaanta, waxba uma maqna
4 Dareemayaal meel walba iyo tababaro badan
Naqshad: Lacag badan, Huawei badan
Qalabku wuxuu leeyahay qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka duruufaha durugsan ee wixii Apple ay bixiso. Huawei's smartwatch waa mid gebi ahaanba wareegaya oo Waxay leedahay cabirro ah 46,2 x 46,2 x 12 milimitir oo ka yaabiyey baaxaddooda weyn, wax aan caadi ahayn noocan ah saacadda. Tani waa wax layaableh, laakiin waxaan dhihi karnaa taasi nagama dhigeyso "xad dhaaf" weyn midkoodna.
Waxaad ku iibsan kartaa qiimaha ugu fiican ee Amazon
Dhinaceeda, saacaddu waxay leedahay gebi ahaanba madow birta birta ah ee daabacaadda aan tijaabinay iyo silsilad silikoon ah. Waxaan xusuusineynaa in Huawei uu sidoo kale bilaabi doono nooc gebi ahaanba lagu dhisay titanium, oo leh suun isku mid ah isla markaana waxaan ku iibsan karnaa xargaha kala duwan nidaamka xiritaanka fudud meelaha caadiga ah ee iibka. Xagga miisaanka, kaliya 52 garaam, Huawei Watch 3 ayaa layaabay laydhkiisa. Dhismuhu aad ayuu u wanaagsan yahay, waa la dareemayaa premium si la mid ah sida salka looga sameeyo balaastig dhalaalaya / dhoobada dhoobada. Ma qaadanayso daaweyn badan si loo ogaado inay tahay wax soo saar heer sare ah.
Qalabka iyo softiweerka, HarmonyOS waa miraha doolshada
Si loo fuliyo howlaha caadiga ah, shirkadda Aasiya waxay go'aansatay inay sameyso processor-keeda, HiSilicon Hi6262, Marka nuqulkani kama soo baxayo processor-yada ka soo baxa Kirin, kuwaas oo loogu talagalay aaladaha u baahan awoodaha sare. Waxaan haynaa 2 GB oo RAM ah inuu raaco processor-ka iyo xitaa 16 GB oo kaydinta wadarta labada codsi iyo waxyaabaha ku habboon maqalka maqalka.
Hawsha daadgureynta biyaha
Nidaamka hawlgalka ee jawharadkan curcurka waa Harmony OS 2.0, qalabkii ugu horreeyay ee Huawei oo leh nidaamkan gaadha dadweynaha guud. Dareenkeenu waa mid dhalaalaya HarmonyOS si habsami leh ayuu u socdaa mana aanan la kulmin wax cilad ah - dhab ahaantii, wuxuu si toos ah ula tartamayaa tartanka, iyadoo xawaaraha xawaaraha uu ka sarreeyo Wear OS iyo beddelka Samsung. Waxay leedahay Huawei App Gallery u gaar ah oo loogu talagalay Watch, nasiib-darrose maanaan helin codsi soo jiidasho leh oo ku filan si looga faa'iideysto shaqadan. Si kastaba ha noqotee, codsiyada lagu rakibo wadaninimadooda waxay umuuqdeen kuwa kufilan, iyo sidoo kale la midoobida barnaamijka caafimaadka ee Huawei oo aan kugula talineyno in laga rakibo App Gallery.
Shaashadda iyo isku xirnaanta, waxba uma maqna
Waxaan leenahay guddi caan ah 1,43-inji AMOLED kaas oo bixiya wadar ah 466 x 466 pixels, natiijada aan haysanno 326 pixels halkii inji. Lagu bixiyo heerka cabitaanka fudud ee 60Hz, taas oo in ka badan ku filan shaashadda shaashadda casriga ah. Ugu horreyntii waxay muujineysaa xaqiiqda ah inaan haysanno ugu badnaan 1.000 nits dhalaal, wax si gaar ah looga arki karo banaanka halka aan ka dhigi karno inta ugu badan ee awooddan ah iyadoo la adeegsanayo in dharaar cad loo adeegsado wadar iyo xurmo, iyada oo aan laga fikirin ama aan la arag wax dhibaato ah oo ka dhashay.
Marka laga hadlayo isku xirnaanta, waxaan leenahay isku xirnaan - 4G iyada oo loo marayo eSIM, kaas oo xilligan la jaan qaadaya oo keliya noocyada Movistar iyo O2, kor u qaadista dhibaatooyinka qaar ee Orange, Vodafone iyo waxyaabo kale oo ka dhasha. Waxaan sidoo kale leenahay NFC In kasta oo aanan wali bixin karin maxaa yeelay Huawei wali wuxuu ka shaqeynayaa heshiisyada albaabbada lacag bixinta. Hayso Bluetooth 5.2 iyo WiFi 802.11n inta ka hartay isku xirnaanta, wax noo oggolaan doona raaxada aan waxba ka maqneyn haba yaraatee.
Dareemayaal meel walba iyo tababaro badan
Waxaan heysanaa intaan badan ee dareemayaasha, sidaa darteed waxaan ka shakisanahay inaad awood u leedahay inaad qabato hawl kasta oo Huawei Watch 3 uusan awood u lahayn cabirka:
Qalabka shucaaca dhererka oksijiinta
Waqtigan la joogo heerkulbeegga ayaa awood u leh oo keliya inuu cabbiro heerkulka maqaarka, laakiin inta lagu jiro bisha Luulyo waxaan heli doonnaa cusbooneysiin noo oggolaaneysa inaan cabirno heerkulka jirka. Barometer-ku waa mid aad u saxan isla markaana waxay ku dhacdaa inta ka hartay dareemayaasha ay la jirto Huawei Waxay horeyba u xaqiijisay waxtarkeeda nuskhadii hore ee saacadaheeda casriga ah.
Sida tababarka waxaan leenahay in ka badan 100 nooc oo kala duwan, taasi waxay na siin doontaa natiijooyin la isku halleyn karo oo ku saabsan codsiga Huawei Health. Kani waa smartwatch ee shirkadda leh fursadaha ugu ballaadhan ee arrintan la xiriira.
Madax-bannaanida loo ballanqaaday ee qalabku waa maalmo leh dhammaan awoodaha firfircoon ee firfircoon iyo illaa 14 maalmood haddii aan u tagno habka keydinta tamarta. Imtixaanadayada waxaan helnay 2 maalmood oo ah isticmaalka ugu badan iyo ilaa 12 maalmood waxay na siin doontaa heerka kaydinta tamarta, Huawei wuxuu noo ballan qaadayaa in cusbooneysiinta soo socota aan ku heli doonno natiijooyinka ay ballanqaaday sumaddu.
Huawei Watch 3 wuxuu umuuqdaa tijaabadii ugu horeysay ee HarmonyOS litmus iminkana waa uu dhaafay, si daacad ah, khibrada isticmaale ayaa ka sareyso noocyo badan oo hore oo Apple Watch ah oo aad uga sareeya Wear OS. Shaki la'aan, saacad ah 369 euro (oo leh FreeBuds 3 hadiyad ahaan) oo weli ku jirta heer aad u sarreeya ayaa loo dhigaa nooca ugu caqliga badan aragtidayda ku saabsan Android.
HarmonyOS waxay soo bandhigtay awood qaali ah iyo dareere
Waxba kama maqnaadaan heerka qalabka
App Gallery wuxuu ubaahan yahay maalgashi dheeri ah
Madaxbanaanida weli ma ahan wixii lagu balamay
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » HUAWEI Watch 3, oo leh HarmonyOS waa smartwatch tixraaca
Ka faa'iideyso heshiisyadan cajiibka ah ee ku saabsan alaabada Oclean si aad u xoqdo xirfad-yaqaan